Maitiro ekuwana iyo Apple Tarisa nechishandiso Tsvaga yangu iPhone | IPhone nhau
Apple yawana tsinga chaiyo mune chirahwe chemabhande eApple Watch, uye parizvino inokupa iyo hombe nhamba yavo muApple Chitoro. Asi zvakare, kunze kwayo, uye nemitengo inodhura kwazvo isu tinogona, kunyangwe dzimwe nguva mhando yacho inogona kusiya zvishoma kudiwa. Zvino zvatava pakati pezhizha, zvinowanzoitika kuti tinobvisa Apple Watch pane kanopfuura kamwe chiitiko, kunyanya kana kuchipisa uye chero chinhu chatinacho pamaoko edu chinotinetsa. Kana iyi iri nyaya yako uye dzimwe nguva usingayeuke kwawakasiya yako Apple Watch, mune ino chinyorwa tiri kuzokuratidza sekugona kwedu kuiwana pamwe nekushandisa Tsvaga yangu iPhone.
Kubva kuvhurwa kweKutsvaga yangu iPhone application, neapp iyi tinogona kuwana chero chishandiso chakabatana neakaundi yedu, Kubva paPadad, yapfuura iPod, Mac, kuenda kuAirPods uyezve iyo iPhone. Panguva ino, Apple haina kutipa mukana wekuwana iyo Apple Penzura mukati meiri basa, zviri pachena nekuda kwekukanganisa kwayo. Pano tinokuratidza kuti tingawane sei nyore Apple Watch yedu, zviripachena uye sekune neAirPods, munzvimbo isina kukwana senge pamba pedu.
Tsvaga yangu Apple Tarisa neiyo Tsvaga yangu iPhone app
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuenda kunyorera iyo yakaiswa natively pane yedu iPhone, iPad kana iPod Kubata. Kana isu tisina chero paruoko, tinogona kuzviita kuburikidza newebhu icloud.com.
Zvese zvishandiso zvine hukama neiyo imwechete Apple ID zvichave zvakanyorwa pazasi. Tinofanira kusarudza iyo Apple Watch.
Munhanho inotevera, nzvimbo yeApple Watch icharatidzwa pamepu, nzvimbo inofanirwa kunge iri patiri. Isu tinoenda kuzviito uye tinya ridza Rwiyo.
Panguva ino iyo Apple Watch ichatanga kuburitsa yakajairika kurira iyo iyo iPhone kana iPad inoburitsawo patinoshandisa iyi sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nzira yekuwana yako Apple Watch neiyo Tsvaga yangu iPhone app
Zvakanaka mune yangu kesi mushure mekuyedza beta yeios 11 inoiburitsa ini handina mukana kune wachi yeapuro, ndinofanira kubatanidza zvakare asi pese pandinoyedza haiiwani